तपाईको जिल्लालाई फ्रिवाईफाई जिल्ला बनाउने हो ? यसरी जुटाउन सकिन्छ पैसा ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उद्योग > तपाईको जिल्लालाई फ्रिवाईफाई जिल्ला बनाउने हो ? यसरी जुटाउन सकिन्छ पैसा !
तपाईको जिल्लालाई फ्रिवाईफाई जिल्ला बनाउने हो ? यसरी जुटाउन सकिन्छ पैसा !
नेपालका अधिकाँस स्थापनमा इन्टरनेट नभएकै कारण धेरै मानिसहरुले विश्वभरका सम्पूर्ण जानकारी लिन सकिरहेका छैनन् । उनीहरु सूचनाबाट पनि पछि परिरहेका छन् । तर अब जिल्लालाई नै फ्रिवाईफाई जिल्ला बनाएर सबैमाझ विश्वलाई जोड्ने अभियान प्रवासबाट सुरु भएको छ ।
म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमितिले जिविसले अघि बढाएको जिल्लालाई फ्रिवाइफाई बनाउने योजनामा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सहयोग जुटाएका हुन् । देशमै नमुनाका रुपमा म्याग्दीमा सञ्चालन हुन लागेको इन्टरनेट सेवा विस्तार योजनाका लागि हालसम्म रु ५० लाख जुटाइसकिएको मोनाका कोषाध्यक्ष चक्र थापाले जानकारी दिएका छन् ।
मोनाले देश रेहका र सबै बिदेशमा रहेका मोनाको कार्यसमितिमार्फत सहयोग सङ्कलन कार्यलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । मोनाको विश्वका २२ देशमा राष्ट्रिय समिति गठन भएको छ । रु चार करोड लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि नेपाल ग्रामीण दूरसञ्चार प्राधिकरण कोषले ५० प्रतिशत लगानी गर्न सहमति जनाएको छ । वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन भएको छ महिनाभित्र सबै बस्तीमा इन्टरनेट पु¥याउने गरी उक्त तयारी गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७३ कार्तिक २१
२०७३ कार्तिक २१ गते १३:२४ मा प्रकाशित
थाहा पाइराख्नुहोस्, दर्जन कम्पनीले ल्याउँदैछन् प्राथमिक सेयर !
पैसा ठिक गर्नुहोस्,४ अर्ब ५१ लाख ९२ हजार रुपैंया बराबरको सेयर पाइपलाइनमा !
तिहारमै मात्र आउँछ विदेशबाट १ अर्ब ५० करोडको झिलिमिली बत्ती !
विर्सनुभयो कि एनएमबि लघुवित्तको १५०% हकप्रद भर्न ? अब १ कार्यदिन मात्र बाँकी
थाहा पाइराख्नुस्, विकास बैंकले दिँदैछ २० प्रतिशत बोनस सेयर !